Uthaqa umvulele ithuba lebhizinisi
UKUVALWA kwezwe kumvulele amathuba ebhizinisi uNksz Zanele Luvuno
SLINDILE KHANYILE | June 18, 2020
IZINSELELO eziqhamuke ngenxa yokuvalwa thaqa kwezwe zishiye abanye bekhala kodwa kukhona osomabhizinisi abahleka bodwa ngoba kubona kuvule amathuba amasha.
Omunye wabo nguNksz Zanele Luvuno ongumsunguli nomnikazi weNative Barter, enamabhizinisi emikhakheni ehlukene.
Elinye lamabhizinisi yisitolo esidayisa ukudla, * -Ok oseShallcross, eThekwini. Lesi sitolo asisagcini ngokudayisela amakhasimende afika esitolo kuphela kodwa sesidayisela nalawo athenga esebenzisa ubuchwepheshe besimanjemanje, bese ukudla kuhanjiswa emakhaya.
Ukudilivwa kokudla ukuqale ngoba ezama ukunyusa isibalo samakhasimende ngenxa yokuvalwa kwezwe thaqa.
“Enye yezinselelo amakhasimende ethu abebhekene nazo ngesikhathi kuvalwa izwe ukuswela ezokuthutha nobekwenza angakwazi ukuzothenga ngendlela afisa ngayo. Silibone lapho ithuba lokuthi asiqhamuke neqhinga lokuthi akwazi ukuthenga ukudla nge-internet bese siyawahambisela kona,” kusho uNksz Luvuno.
“Sigxile emakhasimendeni asemalokishini nasezindaweni zasemakhaya ngoba bonke abantu abakudilivayo ukudla emakhaya njengamanje abababhekeleli abantu abahlala kulezi zindawo.”
Uthe enye into ebagqugquzelile yindaba yokuphepha njengoba sekuphilwa esikhathini seCoronavirus ukuthi abantu bahambe begibela, beyoma olayini akuphephile.
“Enye ingxenye yebhizinisi lethu isetshenziswa yilabo bantu abanakekela abazali babo abangahlali nabo emakhaya ngenxa yokusebenza. Kukhona nje odokotela abazinze eKapa abathengela abazali babo ukudla bese siyabahambisela eFolweni. Sidiliva mahhala uma uhlala endaweni eyibanga elingekho ngaphezu kuka-4km kanti kuwuR60 uma kuyibanga elingu-20km.”
Uma umuntu eqala ukuthenga nge-internet bayavuma afake i-oda kodwa akhokhe uma sekufikile ukudla kwakhe ukuze ezojwayela futhi ezobathemba.
I-Native Barter ikhona nasemikhakheni wokuqashwa kwabantu njengoba igxile nasekufuneleni izinkampani ezihweba kwi-JSE izikhulu zabantu abamnyama futhi inanenkampani etshala ezakhiweni njengoba inamabhilidi angamahhovisi.
UNksz Luvuno uthe kumhluphile ukuthi ungowesifazane omnyama futhi osemncane.
“Ngoba ngaqala ngisiza izinkampani ezisuke zifuna abantu ezizobaqasha kuthe uma sengiqala ngibheka kweminye imikhakha kwakhona abangayizwa kahle leyonto bangibuza ukuthi ngixakwe yini futhi ngazini ngalena eminye imikhakha.
“Kumele uzazi ukuthi uwubani, futhi ungavumi abantu bakuvalele entweni eyodwa. Bengizibuza nje ukuthi ukube ngalalela abantu ababethi angigxile kokukodwa ngabe nginjani manje ngoba ibhizinisi lokuqasha abantu yilona elishayeke kunawo wonke amabhizinisi ami njengamanje.”
Uthe nokuthola uxhaso lwemali kube nzima kodwa wathi kumqoka ukujwayela ukwazi ukuthi izinto zenzeka kuphi futhi kanjani kulowo mkhakha ongena kuwona.
Uthe nokusebenzisana nochwepheshe kubalulekile. “Awukwazi ukuthatha noma yimuphi ummeli uma uyotshala imali ebhilidini, udinga ummeli ongungoti kulowo mkhakha.”
UNksz Luvuno udabuka eMlaza, usezinze naseGoli ngenxa yomsebenzi. Uneziqu zeBA ezigxile kwiPolitics neHistory kanti unendodana eyodwa.